Sun, May 22, 2022८ जेठ, २०७९
- चेतना केसी | काठमाडौं,
विश्वव्यापी रूपमै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । सन् २०२० मा विश्वभरका डिजिटल प्रयोगकर्ताहरूका अनुसार, ४ सय ५७ करोड मानिसले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् ।
हामीले सञ्चार र अभिव्यक्तिबारे सोचेका सबै सामान्य कुरालाई परिवर्तन गर्दै इन्टरनेटले असीमित सम्भावनाहरू ल्याएको छ । यसले हाम्रो जीवनशैलीलाई धेरै नै सहज बनाइदिएको छ ।
हिजोआज अधिकांश केटाकेटी र बालबालिकाहरू दिनदिनै इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् । यो प्रयोग गरेर उनीहरूले आफैँलाई शिक्षा दिइरहेका छन् र धेरै कुराबारे थाहा पाइरहेका छन् ।
इन्टरनेटले फाइदाहरू दिएको छ तर यसले गर्दा केटाकेटीहरूले च्याट गरेर र गेम खेलेर आफ्नो निद्रालाई छोट्याइरहेका छन्, जसले धेरै जनालाई निद्रा नलाग्ने समस्यातर्फ धकेलिरहेको छ र उनीहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि असर गरिरहेको छ ।
त्यसपछि मैले पढाइ छाेडेँ
त्यसैले सरकार र अन्य सामाजिक संस्थाहरूले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने केटाकेटीहरूबारे चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् । इन्टरनेट एउटा विशाल क्षेत्र हो । यदि हामीले यसलाई जिम्मेवार भएर प्रयोग गर्‍यौँ भने हामीले धेरै राम्रा कुराहरू पाउन सक्छौँ ।
धेरै मानिसहरूले इन्टरनेटको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । त्यस्ता मानिसहरू इन्टरनेटको पछाडि लुक्छन् र निर्दोषहरूलाई निशाना बनाउँछन् ।
हो, इन्टरनेटमा धेरै शिकारीहरू ढुकेर बसिरहेका हुन्छन् । धेरै खतरनाक मानिसहरू दाउ हेरेर बसिरहेका हुन्छन्, जसले सिधासादा मानिस भेट्नेबित्तिकै फसाइहाल्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा घृणा फैलाउन चाहन्छन् ।
एउटा तथ्यांकअनुसार विश्वमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै प्रकारको साइबर आक्रमणबाट पीडित बनेका छन् ।
म पनि एकपटक समस्यामा परेकी थिएँ । एक जना अज्ञात प्रयोगकर्ताले मलाई नराम्रो भाषा प्रयोग गर्दै बारम्बार फेसबुकमा सन्देश पठाइरहन्थ्यो । म एकदमै डराएकी थिएँ, अनि मैले एक जना भरपर्दो मान्छेलाई ती सन्देशको फोटो खिचेर पठाएँ ।
हाम्रा साथीहरूको सहयोगमा हामीले त्यो व्यक्तिको फेसबुक अकाउण्टबारे उजुरी गर्‍यौँ र त्यो अज्ञात फेसबुक प्रयोगकर्ताको फेसबुक अकाउण्ट नै बन्द भयो । त्यो मान्छेले फेरि कहिल्यै मलाई सन्देश पठाएन ।
सरकार ! भन्देऊ म कुन ठाउँमा सुरक्षित छु ?
इन्टरनेट एउटा काल्पनिक संसारजस्तो देखिन्छ तर सबै मोडहरूमा इन्टरनेट दुरुपयोग गर्ने मान्छेहरू छन् भन्नेबारे हामी सचेत हुनुपर्छ ।
त्यसो भए हामीलाई के गर्न आवश्यक छ त ? के हामीले इन्टरनेट चलाउन बन्द गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिले त यो हामीलाई हाम्रो अध्ययन, गृहकार्य गर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो । यो हामीले आफ्नोबारे जान्ने, आफ्ना सिर्जना र लेखहरू देखाउने र अरूसँग अर्थपूर्ण कुराकानी गर्ने ठूलो ठाउँ हो ।
महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने इन्टरनेट सुरक्षित तरिकाले कसरी चलाउने र आफू समस्यामा परेको जस्तो महसुस भयो भने सम्बन्धित ठाउँमा रिपाेर्ट गर्नुपर्छ या त्याेबारेमा भरपर्दो मान्छेलाई यसबारे भन्नुपर्छ ।
हामी सबैलाई सुरक्षित तरिकाले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने अधिकार छ तर हामी सतर्क रहेर मात्र यसकाे प्रयाेग गर्नुपर्छ । हामीलाई कुनै समस्या परिहाल्याे भने डराउनु हुँदैन । हामीले यसविरुद्ध लड्नुपर्छ । समस्यालाई बेवास्ता गर्नाले त्यस्ता खराब मानिसहरूलाई हौसला मिल्छ । त्यसैले हामीले आफ्नै लागि आवाज उठाउनुपर्छ ।
साइबर अपराध : बच्ने कसरी ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १५, २०७७, १४:३५:००